Weather in Thailand tamin'ny Novambra ~ Journey-Assist - Aiza no aleha. vanim-potoana. hamandoana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand tamin'ny Novambra
Weather in Thailand tamin'ny Novambra
Ny volana novambra dia heverina ho faran'ny fotoanan'ny orana any Thailand. Mihasimba tsikelikely ny lanitra, milamina ny rivotra ary misokatra amin'ny vanim-potoana fizahan-tany ny fizahantany. Na izany aza, lehibe ny faritanin'i Thailand ary any amin'ny faritra sasany dia miverina aloha ny orana, ary any amin'ny hafa any aoriana. Noho izany, amin'ny volana Novambra dia ilaina ny misafidy ny fialantsasatra amin'ny fialantsasatra mety. Avy amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ny hoe misy ny toetr'andro any Thailand amin'ny volana novambra ary inona no toerana tsara kokoa aleha.
Weather eo amin'ny faran'ny fararano
Tamin'ny fararano fararano dia mipoitra tsikelikely i Thailand amin'ny vanim-potoana mando. Fa tsy nanjavona eo noho eo avy hatrany ny gidro, noho izany ny toetrandro amin'ny fiandohana sy ny faran'ny volana novambra dia mety ho samy hafa. Tamin'ny tapany voalohany tamin'ny volana novambra, mbola tsara ny andro avy amin'ny orana: matetika izy io, orana ny lanitra, tsofina ny rivotra. Amin'ny tapany faharoa amin'ny volana faharoa, ny ankamaroan'ny firenena dia tsy misy orana, ny onja lehibe amin'ny ranomasina dia mihena kely ary kely kokoa, ny masoandro dia mihamiratra sy mazava. Ny maripanan-drivotra antonony mandritra ny andro amin'ny volana novambra dia +31 degre Celsius, amin'ny alina dia milatsaka ho 23- + 25 izany.
Na izany aza, arak'izay voalaza tetsy ambony, ny toetry ny andro any Thailand dia miankina amin'ny toerana nofidina. Raha any amin'ny tanibe any amin'ny firenena ny volana Novambra dia misy andro mafana kokoa, avy eo amin'ny nosy maro dia mbola misy toetrandro sy rahona. Andao hojerentsika ny toetrandro amin'ireo trano fandraisam-bahiny malaza indrindra any Thailand.
Mihatsara tokoa ny andro any Pattaya amin'ny volana novambra. Na dia eo am-piandohan'ny volana aza dia tsy dia misy firy ny orana, ary amin'ny faran'ny volana novambra dia kely dia vitsy. Araka ny antontan'isa any Pattaya tamin'ny volana fararano farany, dia misy orana 7-8. Ny hafanana amin'ny antoandro dia tazonina amin'ny + 30- + 32 degre Celsius, amin'ny alina ny rivotra mangatsiaka amin'ny +24. Ny toetrandro mitovy amin'izany dia mahazatra ho an'i Bangkok tamin'ny Novambra.
Ny toetr'andro any Samui tamin'ny Novambra dia mamela ny zavatra tiana. Ao amin'ity hotely ity, ny volana fararano fararano dia ny orana indrindra. Ny toetr'andro Novambra amin'ny Koh Samui sy ny nosy hafa any amin'ny Hoalan'i Thailand (Phangan, Koh Tao) dia marihina amin'ny oram-be maharitra, rivotra mahery, tafiotra ary tondra-drano matetika.
Ny fotoanan'ny orana dia mifarana ao Phuket sy ny vohitra hafa amin'ny morontsiraka Andaman amin'ny Novambra. Ny akaiky ny faran'ny volana, ny andro mafana kokoa sy maina. Ny toetrandro any Phuket amin'ny volana novambra dia mihamazava tsikelikely, mihamafana ny ranomasina.
Raha ny avaratra tany Thailand, ny volana novambra dia avy ny orana, iny dia orana tsy dia ela loatra. Ny mari-pana mandritra ny andro dia manodidina ny +28 degre Celsius, amin'ny alina tsara dia tsara - hatramin'ny +19.
Miaraka amin'ny fihemorana amin'ny fotoanan'ny orana any Thailand, ny hamandoana amin'ny rivotra dia miaro ara-dalàna. Ny fanjanahana dia nanjavona tsikelikely ary nanjary mora kokoa ny fifohana rivotra.
Fetin'ny tora-pasika any Thailand tamin'ny Novambra
Tamin'ny voalohandohan'ny volana novambra, mbola afaka mahita onja mahery eny amin'ny ranomasina ianao. Na izany aza, rehefa manakaiky ny volana, dia mihamalalaka ny ranomasina. Ity dia mipoitra manokana amin'ny fivahinian'ny ranomasina Andaman. Any amin'ny torapasik'i Phuket, ny sainam-pirenena mena dia nanjavona tsikelikely mampahafantatra ny loza ateraky ny ranomasina. Mihamaro hatrany ny fialan-tsasatra mahazo eny amoron-dranomasina.
Tamin'ny Novambra, misokatra amin'ny vanim-potoanan'ny amoron-dranomasina any Pattaya ary ny mpizahatany dia mihamitombo ny morontsiraka. Na izany aza, tsy dia madio sy tsara tarehy ny torapasika any Pattaya, ka ny ankamaroan'ireo tia ny tora-pasika dia aleony mankany amin'ireo nosy manodidina. Ny ranomasina ao Pattaya amin'ny faran'ny fararano dia milamina ary afaka mankafy ny fialantsasatra amoron-dranomasina ianao.
Saika mandao tanteraka ny torapasik'i Samui sy ny nosy hafa akaiky amin'ny Novambra. Tamin'ity volana ity, tsy ny orana maharitra fotsiny ilay nosy fa koa ny rivotra mahery izay nifofofofo ny onja. Ny ranomasina dia feno fotaka sy maloto, milomano ao dia tsy mahafinaritra sy tsy milamina.
Ny hafanan'ny rano amin'ny volana Novambra dia mety tsara amin'ny milomano - +27 degre Celsius. Amin'ny andro maizina, mahafinaritra ny mandany fotoana any an-dranomasina.
Aiza ny tsara kokoa miala voly amin'ny Novambra?
Tamin'ny fararano fararano, miadana ny toetr'andro any Thailandy ary misokatra ny fizahan-tany fizahan-tany. Ity volana ity dia tsara raha miala sasatra any Pattaya, Bangkok ary avaratr'i Thailand. Ny toetr'andro tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatra amin'ny faran'ny Novambra. Afaka mahazo aina sasatra ao Phuket koa ianao amin'ny faha-20 volana. Amin'izao vanim-potoana izao, lasa mihamafana ny ranomasina, afaka milomano ianao tontolo andro, mandehana amin'ny fitsangatsanganana an-dranomasina.
Tsy manoro hevitra ny handeha any amin'ny faritra atsimon'ny Hoalan'i Thailand aho amin'ny Novambra, izay ahitana ny trano fandraisam-bahiny ao Koh Samui, Koh Phangan ary Koh Tao. Amin'ity faritra eto amin'ny firenena ity dia mirotsaka tanteraka ny fotoanan'ny orana ary mety haharitra hatramin'ny faran'ny Janoary.
Ary raha sarotra aminao ny misafidy toerana fandraisam-bahiny, dia vakio ny lahatsoratrao, izay nambarako tamin'ny antsipiriany hoe aiza no tsara kokoa miala sasatra any Thailand.
Amin'ny volana Novambra, dia mbola afaka manao fialan-tsasatra amin'ny tetibola any Thailand ianao. Amin'ny fiandohan'ny volana, mbola ambany ny vidin'ny fizahan-tany, fa raha ny faran'ny volana novambra kosa, ny sandan'ny tapakila tapakila. Fa amin'ny ankapobeny, ny fiakaran'ny vidin'ny novambra dia tsy mihoatra ny 15%. Misy vintana lehibe manidina amin'ny fonosana mirehitra.
Toy izany koa amin'ny famandrihana sidina sy hotely. Amin'ny tapany voalohany amin'ny volana novambra, mihena ny vidin'ny vidiny amin'ny tapany faharoa.
Aiza kokoa ny miala sasatra any Thailandy amin'ny volana Oktobra?
Ny haavon'ny fialan-tsasatra amin'ny volana novambra dia tsy dia lafo loatra amin'ny volana desambra - janoary, fa ny toetrandro dia tsy mahazo fahafinaretana sy fitoniana, indrindra any amin'ireo faritany atsimo. Ny fitsangatsanganana amin'ny volana Novambra dia tena mahazo aina indrindra any avaratry Thailand, indrindra fa amin'ny faran'ny fararano dia misy fety mamirapiratra mahazatra izay atao, izay tsy maintsy vanganao.
Ny azo antoka aloha dia tsara ny mampatsiahy ny fetin'ny tantaram-pitiavana indrindra tany Thailandy, Loy Kratong, natokana hamita ny fijinjana ao amin'ny firenena. Indrindra ho an'ny andro fety, ny mponina eo an-toerana dia manao sambokely homena kely, mametraka labozia kely afovoany, ary amin'ny andro fialantsasatry ny fety dia mitondra labozia misy jiro mirehitra ao anaty dobo akaikin'ny tranony. Mino i Thais fa miaraka amin'ny sambo ny olana rehetra sy ny olana rehetra. Tato ho ato dia nanjary lamaody teo amin'ireo mpivady ny fifankatiavana mba hanome ny sambo tsirairay, mirary faniriana ary miara-manangana ireo sambo mankany anaty renirano. Ny fialan-tsasatra dia hita taratra amin'ny fehin-kibo any amin'ireo tanàn-dehibe, raha sambo sambo an-jatony misy labozia mitsinkafona eo amoron'ny renirano.
Angamba ity latabatra ity dia hanampy anao hamantatra hoe aiza marina no tianao alohan'ny volana Novambra ao Thailand.
5 andro (81.6 mm.)
15 andro (210.5 mm.)
6 andro (98.4 mm.)
15 andro (312.1 mm.)
9 andro (151.9 mm.)
15 andro (210.8 mm.)
15 andro (209.6 mm.)
4 andro (72.3 mm.)
15 andro (215.6 mm.)
15 andro (209.3 mm.)
8 andro (101.3 mm.)
8 andro (95.8 mm.)
9 andro (150.9 mm.)
14 andro (230.0 mm.)
18 andro (281.4 mm.)
8 andro (101.5 mm.)
7 andro (94.9 mm.)
15 andro (300.2 mm.)
8 andro (93.3 mm.)
19 andro (303.3 mm.)
15 andro (311.1 mm.)
15 andro (312.8 mm.)
15 andro (209.9 mm.)
15 andro (210.1 mm.)
15 andro (210.0 mm.)
15 andro (209.1 mm.)
12 andro (263.7 mm.)
15 andro (297.3 mm.)
15 andro (206.4 mm.)
9 andro (151.8 mm.)
13 andro (264.8 mm.)
3 andro (59.8 mm.)
15 andro (280.4 mm.)
16 andro (256.5 mm.)
15 andro (209.0 mm.)
15 andro (308.3 mm.)
15 andro (211.8 mm.)
4 andro (56.8 mm.)
9 andro (167.5 mm.)
15 andro (210.9 mm.)
15 andro (310.3 mm.)
8 andro (94.4 mm.)
14 andro (278.1 mm.)
3 andro (78.9 mm.)
3 andro (74.0 mm.)
15 andro (310.0 mm.)
1 andro (19.7 mm.)
4 andro (63.5 mm.)
15 andro (310.8 mm.)
6 andro (89.2 mm.)